Baseball Amayunifomu - Izinto Kumelwe Ube Aware Of - China Shenzhen ngokwezifiso Ezemidlalo Gqoka
Baseball Amayunifomu - Izinto Kumelwe Ube Aware Of
Baseball iyunifomu yilezo, lapho abadlali baseball emhlabeni wonke ukugqoka ngenkathi idlala. Eyokuqala baseball iyunifomu zazigaxwa New York Knickerbockers Baseball Club phakathi nomdlalo ngonyaka 1849. Izingubo baseball ube izingxenye eziningana kanti lezi zibandakanya: amajezi, uwumnikazi wenkampani, ibhulukwe, amakepisi, amasokisi, izicathulo kanye amagilavu. Kulezi zinsuku, imifaniswano ihambisane amalogo nemibala ehlukahlukene ukuhlukanisa amaqembu.
Izingxenye ezihlukahlukene baseball iyunifomu:
Manje ake abe look at the izingxenye ezinhle iyunifomu baseball izitayela njengoba ngamunye imininingwane kulesi sikhathi samanje.
Izicathulo: Izicathulo ungomunye izingxenye ezibalulekile imifaniswano baseball futhi kuncike preference we abadlali, umbala izicathulo futhi sishintsha. Kodwa manje black umbala kuphela, okuyinto letikhetselwe izicathulo ngoba baseball iyunifomu. Kungenxa yokuthi, omnyama kuyinto umthunzi jikelele, kahle elifana ne kukho konke nasezintweni zonke umthunzi futhi okubaluleke kakhulu, lokhu umthunzi inikeza isisekelo esikhulu kwezinye izingxenye iyunifomu baseball.
I amasokisi: Ngo nenyumfomu baseball, le amasokisi ukusebenza njengoba isihe ibhulukwe. Njengoba kungekho mthetho mayelana obuphelele ngikhefuzele baseball, ngakhoke abadlali bangakhetha isitayela njengoba ngamunye abakukhethayo. Ngokwesibonelo, uDavide Wright ukhetha ukuya ephezulu cuffed ngesikhathi imidlalo imini ephansi cuffed ngesikhathi imidlalo ebusuku. Iningi abadlali cuffer okusezingeni eliphezulu akhethe ukugqoka amasokisi okuqinile anemibala futhi ezinye zazo uthanda stirrups.
I ngikhefuzele: I ibhulukwe baseball ziyingxenye ebalulekile ye iyunifomu baseball jikelele. I ibhulukwe baseball akuveli nanoma iyiphi imithetho mayelana eziphakeme. Abadlali bangakhetha ukugqoka ibhulukwe ngenhla noma ngezansi cuff kuye izintandokazi zabo.
Amajezi: Izingubo ijezi baseball futhi ziye zaya ezinye izinguquko. Phakathi kwawo-1970 nawo-80s, kwakukhona pullovers esetshenziswa njengoba amajezi. Ngemva kwalokho, kwakukhona inkinobho phambi amahembe. Manje kukhona ngisho uziphu phambi ihembe esetshenziswa njengoba ijezi. Ngaphandle isitayela, kukhona ezinye izinto ezengeziwe, okuyinto ukuhlukanisa amajezi baseball. Kukhona esifubeni logo elula ibekwe ijezi ekhaya. Ngaphandle kwalokho, kulezi zinsuku, kukhona okuqinile-anemibala enye baseball amajezi, okuyinto ngempela olufuna abadlali baseball junior.
I cap: Ukuba cap uyisidingo kuzo zonke iyunifomu baseball. I-caps baseball awazange yasungulwa sokuqapha amehlo abadlali 'kusukela eziyingozi ilanga imisebe noma ukwehlukanisa amaqembu. Kunalokho, yasungulwa njengengxenye iyunifomu baseball njengoba ngesikhathi maphakathi nawo-1800, akukho umnumzana esetshenziswa ukuvela ngaphandle ikhanda kwambulwe. Lo mkhuba, ngisho kule izibuko ifakwe, inkathi ezikhululekile xaxa. Ukuze wenze izinto imfashini kakhudlwana, the CAPS baseball seziyatholakala ne izidlaliso ithimba noma ilogo imifanekiso noma izinhlamvu zokuqala komuzi ekhaya. Kanye cap, phama ngaphansi liye washintsha. Ngaphambili, lokhu kwaba green, Ngakho-ke, lashintsha laba grey ukukhanya futhi manje isisezweni abamnyama.
Batting nezigqoko Lena uhlobo nangesigqoko esetshenziswa Batter ukuvikela indlebe yakhe futhi ikhanda ezibhekene imbiza kusukela ibhola. Usizo lwabenza imisenenzi batting nezigqoko ihambisane kuphela olulodwa indlebe umvikeli (for the lefties, ukuvikelwa iwukuba ezindlebeni kwesokudla futhi ngenxa Batters sokudla, ukuvikelwa iwukuba kwendlebe yangakwesobunxele. Batting nezigqoko abantu junior nabasafunda ihambisane kokubili zizivikele indlebe ukuze bazivikele amabhola okuxekethile.
Isigqoko sokuzivikela Umzingeli sika: Lena isigqoko zokuzivikela eliza buso ubuso ngenxa Bangababambi. Isitayela yakamuva yale nangesigqoko izici buso kuhlanganiswe ngokugcwele kanye nesigqoko sokuzivikela, okuyinto iyafana imaskhi hockey goalie. Kodwa inguqulo yendabuko lokhu nangesigqoko iza buso elehlukile, esigqokwa phezu nangesigqoko, iyafana yisigqoko batting, ngaphandle yokuthi kuziwa ngaphandle Ukuvikelwa indlebe.
Ngokucabangisisa ngokukhetha ilungelo baseball iyunifomu: Njenganoma iyiphi enye imidlalo, ngisho umdlalo we-baseball, abadlali babelwa izindima ezahlukene ku izingxenye ezithile iphimbo. Ngenxa yalokho-ke uba ngempela ezinzima ngenxa izethameli ihlonze noma yibuphi umdlali. Kodwa ekukhombeni njalo umdlali kuyadingeka, ngakho egqoke ngokwezifiso baseball emajezi kuyadingeka kakhulu njalo leqembu.
Kunezizathu okuningi ukwenza ngendlela oyifisayo iyunifomu okungaphezu nje ukukhomba abadlali ngabanye. Izingubo ngezifiso futhi ukwenza abadlali ethandwa ngempela phakathi abalandeli babo emidlalweni emikhulu kanye abalandeli ngokuvamile uzame ukukopisha izithombe zabo. Ngakho, uma ucabanga ukuklama ngokwezifiso ithimba emajezi baseball ngoba ilungu leqembu lakho, khona-ke kungcono ukuqaphela izinto abazenza ukuklama iyunifomu okukhulu.
Igama iqembu: Nakuba kuziwa ukuklama iyunifomu baseball, njalo ukusebenzisa into eyingqayizivele. Coming ngagama ezinye ithimba, okuyinto engazange yenzeke ngaphambili ngokuvamile kuba nzima ukuyenza. Igama ezingafani ivelele kalula ngenkathi okwenza abanye uqaphela igama.
Imibala: Ikhetha imibala efanele, okuyinto uvumelane ubuntu wamalungu eqembu kanti okwenza ithimba ivelele kukhona umsebenzi edangalisayo ngempela. Cishe wonke amaqembu baseball akhethe ukugqoka shades like lasolwandle blue, obomvu,-royal blue noma emnyama. Ngisho ungakhetha lezi imibala ithimba lakho, kodwa yokuhlanganisa lezi imibala nge ezinye imibala kancane esetshenziswa kuyoba ukhetho best. Gray, omnyama nomhlophe amanye shades hlangothi, okuyinto ungasebenzisa ne encomekayo ithimba iyunifomu umbala. Kodwa ungakhethi imibala kuka ezimbili, kungenjalo iyunifomu izobukeka umfaniswano Clowns. Ngakho, ngaphambi kokuba sikhethe lokho iyunifomu sokugcina, hlola indlela kahle imibala kuyahambisana.
Ithimba logo: Nakuba kuziwa ekukhetheni ilungelo ithimba logo, kubalulekile ukuba uvakashele amanye imifanekiso kanye isitokwe izithombe kumawebhusayithi. Qala ngokwenza search esheshayo mayelana amalogo ezemidlalo. Kukhona amalogo eziningi kuwebhu ukukhetha kusuka futhi ungakwazi kalula ukhethe elilodwa ngaphansi kuka- lokho okudingeka ukuba akhokhe imali art. I ukulungiswa ukuzenza kuzokwenziwa ukuthi ingosi futhi akudingeki ukuba sikhathazeke ngalutho.
Amafonti: Thatha ngosizo eziningi amafonti khulula, olutholakalayo kuwebhu bese ukhetha eyiyona olufana ngesimo sengqondo esifana nesika nethimba lakho. Kulokhu, into yokuqala ukuthi udinga khumbula indlela okubaluleke ngayo ukuba zonke izinto ku ijezi bheka akucace. Ngaphandle kwalokho, ungalokothi ukhohlwe ukuthi ukugxila glyph inombolo ngenkathi kuziwa kokunquma amafonti. Ngokwesibonelo, uma ucabanga ngokuya ukuthola isikrini ukuphrinta noma ngenela twill, bese kukhethwa ifonti okusontekile noma kwaluqeda kuyoba kubi. Ngakolunye uhlangothi, uma ucabanga ukuba amajezi sublimated, khona-ke akukho isidingo okufanele ayikhathalele uhlobo ifonti, lapho zisebenzisa i-inqobo nje kuyaqondakala ukwenza inqubo Sublimation isicelo.
Ukwenza Izinto Zibe Lula: Ungalokothi uzithathe kalula ukubaluleka lula lapho kuziwa ukuklama iyunifomu ngokwezifiso ithimba lakho le-baseball. The best baseball iyunifomu yilezo, ezithinta izinto ezahlukene kwenzekani kanye izinhlobo ezahlukene imibala elisetshenziswa kuyo. Ungalokothi ukungena nganoma yisiphi ehlombe noma iphaneli imiklamo noma ungayisebenzisi iyiphi ribbing fancy noma ingalo fancy bese uzama ukugcina izinto zilula. Zonke ongayenza ukusebenzisa nesizotha panel ezimbili anemibala bese uzama njengesisekelo sigxile ekwakheni igama ithimba ngendlela, olubheka nje omkhulu. Ngale ndlela, ukubukeka jikelele umfaniswano yakho kuyoba ekhethekile.
Ukukhetha indwangu kwesokudla: Okwamanje, imifaniswano baseball kukhona stretchy futhi engasindi evumela ukuthi abadlali ukuhambisa ngokukhululekile futhi kalula. Ngaphandle kwalokho, lezi iyunifomu nawo eza no ezinye umjuluko iyavuleka noma wicking izindwangu, ezivame eyaziwa ngokuthi umswakama ukuphathwa. Lokhu into kusiza abadlali ukuhlala ukhululekile futhi yomile ngenkathi iqinisekisa breathability okukhulu. Ngakho, lapho kuziwa ngokwezifiso iyunifomu yakho baseball kusukela baseball iyunifomu esitolo, khetha okusezingeni eliphezulu kuphela izinga izindwangu, okungase ukumelana ubunjalo bomzimba walo mdlalo. Ngaphandle kwalokho, njalo zama ukulondoloza indwangu ngokusebenzisa efanele yokuhlanza kanye isitoreji izindlela.
Thola ugqozi kusukela amaqembu league: Uma uhlela ukuba ukhethe iyunifomu ngokwezifiso baseball ithimba lakho esikoleni esiphakeme futhi ayikutholi imibono mayelana nalokho esiyokwenza ke ungathola ugqozi kusukela MLB iyunifomu imiklamo. Ngale ndlela, ungakwazi noma hlela on umklamo olulodwa noma kungaba ukuhlanganisa izinhlobo ezahlukene imiklamo njengoba ngamunye okuthandayo.
Baseball Amayunifomu - Izinto Kumelwe Ube Aware Of Isiqophi Ezihlobene:
We are proud of the high customer satisfaction and wide acceptance due to our persistent pursuit of high quality both on product and service for Ukuminyanisa Phezulu , Sublimated Baseball Jersey , Ice Hockey Uniform , We believe in establishing healthy customer relationships and positive interaction for business. Close cooperation with our customers has helped us to create strong supply chains and reap benefits. Our products have gained us widespread acceptance and the satisfaction of our worldwide valued clients.